Thet Khine – Medium
Self study ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့။
Computer Science အကြောင်း programming အကြောင်းဆိုပေမဲ့ အခြားသူတွေဖို့လဲအသုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ်။
၁ ပထမဆုံး ဘာကို study ချင်တာလဲဆိုတဲ့ goal ပေါ့။ ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကိုလုပ်လို့ပြောတာ။ ဥပမာ ကိုယ်ကဖြင့် programming languageတွေအကြောင်း နားမလည်သေးဘူး ဆိုရင် Compiler တွေရေးမယ်ဆိုတာဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
အဲ့တော့လုပ်ရင် မဖြစ်လာနိုင်တော့ စိတ်ပျက်ပြီးလစ်သွားတာပဲအဖတ်တင်မယ်။ အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တာလေးကစပေါ့။ ဖြေးဖြေးချင်း။
၂ နောက် learning path ကို ရှာပေါ့။ ဆိုချင်တာက ဒါကိုလေ့လာဖို့ ဘာတွေလိုသလဲ။
အခြေခံတွေကဘာလဲ။ ဘာပြီးရင်ဘာလေ့လာရမလဲ။ ဘယ်ဟာတွေ ဖတ်ရမလဲ။ Roadmap လိုကောင်ပေါ့။…
Beginner Developer Survival Guide.
တိုင်ပတ်နေတာတွေ မဖြစ်အောင် ဒါတွေဆောင်သင့်ပါတယ်။
၁ Programmer တွေဖို.အရေးကြီးဆုံး language က English ပါ။ သူ.ကိုနားလည်ရင် Google ကနေ ခေါက်ပြီး tutorial တွေ blog တွေကောင်းကောင်းဖတ်လို.ရပါပြီ။
၂ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ resources တွေဘယ်မှာ ရှာရမလဲသိအောင်လုပ်ပါ။ ဥပမာ Google ကနေ tutotrial ,learning blog တွေ ရှာလို.ရပါတယ်။ libgen.io, pdfdrive အဲ့လို site တွေကနေ ebook တွေ အခမဲ့ဒေါင်းလို.ရပါတယ်။
၃ Google ကိုကောင်းကောင်း အသုံးချတတ်အောင်လုပ်ပါ။ ဘယ်လို keyword တွေနဲ.ရှာရမလဲ။ ဒီ keyword နဲ.အဆင်မပြေရင် …
Career advice for Developer
ကိုယ်တိုင်လဲ အလုပ်လုပ်ဖူး။ အင်တာဗျူးတွေ လဲ မေးဖူး ဖြေဖူးခဲ့တာတွေ ကြုံဖူးတာတွေကိို ကြုံရင် ပြောဖြစ်လေ့ရှိတယ်။
လူတယောက်နဲ. အလုပ်လုပ်ဖို. စစဉ်းစားတဲ့အခါ ဥပမာ အင်တာဗျူးပေါ့။ ဒါဆို အဓိက ၂ ချက်ကို ကြည့်တယ်
သူသည် ဒီအလုပ်ကို လုပ်နိုင်လား၊ လုပ်နိုင်တဲ့ ability ရှိလား အလုပ်လုပ်နိုင်သလားဆိုရင် လုပ်နိုင်တာတင်မကဘူး တခြားဘာတွေပါ ကြည့်သေးသလဲဆိုတော့ သင်ယူနိုင်စွမ်းရှိသလား စိတ်ဝင်စားလားဆိုတာမျိုးပါ ကြည့်တာပေါ့။
နောက်သူ.ကို assigned ချမဲ့ team သည် သူနဲ.အတူတူ အလုပ်လုပ်နိုင်မလား၊ သူကရော team နဲ.အတူတူလုပ်နိုင်မလား ဆက်တွေးရရင် ဒီ organization ကနေရာ သူနဲ.အလုပ်လုပ်လိို့ အဆင်ပြေမလားပေါ့။…
Work ethic for programmer
(Quora ကတွေ.လို.ယူလာတာ သဘောကျလို. title တွေယူပြီး အဆင်ပြေသလိုပြန်ရေးထားတာ)
၁. Haveapositive attitude.
Positive attitude ကအရေးကြီးတယ်၊ လစာရဖို. တင်မဟုတ်ပဲ၊ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်က ဘာလို.အရေးကြီးတယ် ဘယ်နေရာကို ဘယ်လောက်ထိခိုက်နိုင်တယ် ကိုယ်လုပ်ပေးလိုက်ရင်လဲ ဘာတွေပိုကောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာ တွေးပေးတာမျိုး။ အလုပ်မလုပ်ရပြီးရော ဘာလာလာ ပြန်ငြင်းပြီး မဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးက အဆင်မပြေဘူး။ ငါ့တာဝန် မဟုတ်ဘူး တိုက်ရိုက်မသတ်ဆိုင်ဘူးဆိုပြီး တချို.နေရာတွေ မဆိုင်သလိုနေတာမျိုး ကလဲ မကောင်းဘူးပေါ့။
၂. Foster deep knowledge
ဘယ် နည်းပညာကိုလေ့လာ လေ့လာ သေသေချာချာ In Depth ရအောင် လေ့လာတာမျိုး။Main technology တချို.မှာ…
How to learn problem solving skill in programming
Programming လေ့လာတဲ့ beginner အများကြုံရမဲ့ problem ပေါ့။ နောက်တခုက senior ဖြစ်နေတဲ့ CRUD တဲ့ နှစ်ပါးသွားနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များလဲကြုံမယ်ထင်ပါတယ်။
ဘာလဲဆိုတော့ problem solving skill ပေါ့။ Code ကိုဘယ်လိုရေးရမလဲ မစဉ်းစားတတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့။
အဲ့တာကို ခွဲရင် ၂ပိုင်းရမယ်။ တပိုင်းက Programming Langauge အပိုင်းပေါ့ နောက်တပိုင်းကတော့ problem solving အပိုင်း။
Program ရေးတယ်ဆိုတာ programming language တခုခုသုံးပြီး problem solve ရတာဆိုတော့ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ programming language ကို ဘယ်လိုသုံးတယ် ဘာကြောင့်သုံးတယ် ဘယ်နေရာမှာ ဘာသုံးသင့်တယ်ဆိုတဲ့ correct tool…
ကိုယ့်ဆရာ တယောက်က ကျောင်းသားတွေ က စာအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှု. motivation မရှိဘူးလို. ဟိုးတလောက post တခုမှာပြောရင်း ပါလာတယ်။ အကျိုးရှိတော့လဲ အကြောင်းရှိရမှာပေါ့ ဆိုပြီး educational psychology ထဲက motivation theory တွေ လိုက်ဖတ်ပြီး ကောက်နှုတ်ထားတာ။
Motivation ဆိုတာ လူတွေအနေနဲ. သူတို.ရဲ. လိုအပ်ချက် ဆန္ဒ စတာတွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို. လုပ်စေဖို. ရှေရှည် လုပ်စေဖို. ဖြစ်စေတဲ့ တွန်းအားလို.ဆိုရမယ်။ Motivation နဲ. emotion ဘာကွာလဲဆိုရင် emotion ဆိုတာက လက်တလော ပတ်ဝန်းကျင် လှုံ.ဆော်မှူ.တွေကို တုန်.ပြန်တဲ့ ခံစားမှု.ပဲ Motivation ကျတော့ behaviour ကိုဖြစ်စေတဲ့…
နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ် စာတမ်းတွေကို ဘယ်လိုဖတ်မလဲ
နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ် စာတမ်းတွေကို ဘယ်လိုဖတ်မလဲလေ့လာမလဲဆိုတာ Self study လုပ်ချင်သူများအတွက် အရေးပါတဲ့ ကိစ္စတခုပါ။
စာဖတ်တာများ လွယ်လွယ်လေး စာအုပ်ဖွင့်ပြီး ဖတ်လိုက်လေကွယ်လို. လွယ်လွယ်လေး မပြီးပါ။ ပထမဆုံးကတော့ English စာကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် မဟုတ်တောင် ဆိုချင်တာက IELTS score ဘယ်လောက် ဘာညာ ရမှ မဟုတ်ဘူး ဒါပေမဲ့ simple sentence တွေလောက်ကို နားလည်နိုင်တဲ့ အဆင့်ရှိဖို.လိုပါတယ်။ ဘာလို.လဲဆိုတော့ …
ခုတလော functional programming က ခေတ်ထလာတော့ ဒီမှာ ကြောင်တောင်တောင် တွေ တွေ.ရပြန်တယ်။
အဲ့တာဘာလဲဆိုတော့ functional programming ဆိုတာ function တွေသုံးလိုက်ရင် functional programming ဖြစ်တယ်လို.ထင်နေတာကိုပဲ။ function တွေခွဲရေးတာပေါ့။ (အဲ့တာကို procedural programming လို.ခေါ်တာ)
တကယ်က functional programming ဆိုတာ lambda calculus ဆိုတဲ့ computational model အပေါ်အခြေခံတယ်။
ဥပမာ imperative သည် turing machine ပေါ်အခြေခံတယ်။
Lambda Calculus ဆိုတာ နားလည်အောင်ပြောရရင် function ဆောက်မယ် နောက် function…